Obbo Shimalis Abdiisa Prezedaantii Sabaa Fi Sablammii Biyya Oromoo Keessa Jiranii
HomeAfaan OromooObbo Shimalis Abdiisa Prezedaantii Sabaa Fi Sablammii Biyya Oromoo Keessa Jiranii
Damee Boruu: Caamsaa 26, 2019
OPDOn waan guddaa gootee nama maqaaf illee taatu Oromiyaa fi Uummata Ormoo waamuu hin lagannee Obbo Lammaa Magarsaa kaaftee nama maqaa Uummata Oromoo fi Oromiyaa dubbachuun itti ulfaatu prezedaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa nu mudde. Obbo Lammaa Magrsaa Oromiyaa garbummaa Habashaa jalaa baasuuf waan guddaa hojjetee jira jechuuf miti. Haa tahu malee afaan damma godhee boo’ee nama boosisaa oola. Haasa isaa keessa nama dhalootan Oromoo tahe kan haamilee kaasuuf danda’u akka jiru haaluun bu’aa hin qabu. Akeekaa fi Kaayyoon isaa waan ijaarsa OPDO hooganuu taheef Impaayera Itoophiyaa haaromsanii ijaaruuf tattaafachuun Uummata Oromoof garaagarummaa hin qabu.
Karaa biraa Obbo Shimalis Abdissaa Prezedaantii Sabaa fi Sablammii Biyya Oromoo Keessa Jiraatanii Obbo Lammaa Magrsaa irraa karaa baayyee adda akka tahe agarra. Obbo Shimalis Abdiissaaf mirgaa fi haqa Uummata Oromoo kaasuu miti maqaa Oromoo dubbachuun iyyuu biyya Impaayeera Itoophiyaa diiguu tahee itti mul’ata. Kanaafuu hojiin isaa inni duraa Sabaa fi Sablammiin Oromiyaa keessa jiran nageenyi isaanii eegamee bakka barbaadan deemanii waan barbaadan hojjetanii akka jiraatan Uummatni Oromoo akka tajaaijla barbaachisu godhuuf labsa. Hojii isaa duraa keessa tokko galgalaa fi ganama Uummata Oromoo walitti qabee akkaataa sabaa fi sablammii isa keessa jiru ammatee jiraachisuu barsiisuu dha. Warra Uummata Oromoo xiqqeessu, tufatu, abbaaruu, haqaa fi mirga uummata Orommo biyyaa isaa keessa jiraachaa hin kabajne amatanii wajjin jiraachuun salphaa hin tahu. Duraan dursee keessummoonni biyya Oromoo keessa jiraatan kun adaba godhataanii, aadaa, duudhaa seenaa, afaan, haqa fi mirga Uummata Oromoof ulfina akka qabaatan barsiisuun barbaachisaa dha. Hojii mootummaa hojjechaan jira jechuuf malee orma wajjin jiraachuu isatu Uummata Oromoo barsiisa utuu hin taane irraa barachuu qaba. Baajeta mootummaa waan qabuuf horicha balleessuu qaba. Dabalataan Sabaa fi Salammii naannoo Oromiyaa jiran wajjinis waanuma kana oofaa jira. Yaroo fi horii uummataaf faayidaa tokko waan hin qabneirratti balleessaa jira.
Warri eessumaa isaa akka Diyaaqon Daani’el garuu hojii diqaalota Habashaa kana jala dhokkachuudhaan taabotni samii irraa gad arca’ee jedhanii maqaa bataskaanaan lafa qabachaa fi halkan lafa qulaa tahe irratti mana ijaaranii buluudhaan duula biyya Oromoo saamachuu irra jiru. Dhalootni qeerroo kan hin beekne tokko Warraaqsa bara 1974 dura lafa Oromoo harka sadii keessa harka tokko kan dhuunfatee of harkaa qabu bataskaana Ortodoksii ture. Inni hafe immoo harka warra Abbaa lafaa jira ture. Qabeenyi biyya Impaayeera Itoophiyyaa keessa jiru kan madaalamu lafa qaabaachuun qofa ture. Bara amma keessa jirru kana lafa saammachuun sirni dhufaa jiru kun sirna nafxanyootaa kan bara Dargii dura turee fakkaachaa jira. Warri MM baruu keessatti qabatee jiru harcaatota mootummaa Habashaa durii fi ilmaan nafaxanyootaa waan taheef sirni biraa irraa eegamuu hin danda’u.
OPDOn wagga 27 guutuu lafa Oromoo sarartee gurgurachaa baate. Warra lafa Oromoo gurguratee badhaadhe keessa kan akka Dr. Alemuu Simee, Abbaa Dulaa Gamdaa, Kumsaa Damaqsaa, Girmaa Biruu fi Muktaar har’a bashananii jiraachaa jiru. OPDOn lafa Oromoo (yaroo tokko tokko lama sadii irra deebitee) gurgratee qotee bulaa Oromoo kumaatama hedduun lakkawwamuu hiyumaaf haa saaxiltu malee biyya Oromoo hin gurguranne. Warri ODP ofiin jedhan kun garuu biyyaa Oromiyaa fi Uummata Oromoo gurguraa jiru. Kononeel Abiyi waa’ee Itoophiyaa halkanii fi guyyaa yoo odeesse aangoo Impaayeera Itoophiyaa bulchuu waan qabuuf. Garuu Oromiyaa balleesse Impaayeera Itoophiyaan ijaaraa yaadun ilaalcha gabaabaa (short-sighted) qabaachuu taha. Akkaa Impaayeerri Itoopiyaa hin jigne utubaan isaa Oromiyaa fi Uummata Oromoo akka tahe ilmaan nafxanyootaa fi diqaalota Habashaaf hin galu.
Obbo Shimalis hojiin isaa inni duraa godhee fudhatee kan socho’uu eegale Itoophiyaa jabeesse ijaaruu dha. Gowwummaa isaa immoo Oromoo xiqqeesse fi Oromiyaa diigee Itoophiyaa ijaaruuf wixxifachuu isaa ti. Utuu nama beekaa tahee Uummata Oromoo ijaaruudhaan Oromiyaa keessatti tasgabbii uumee akka sabaa fi sablammiin naannoo Oromiyaa jiran gara Oromiyaatti harkisaman gochuuf ayyaana akka qabu hubachuu danda’u qaba ture. Lafa Oromoo saamsisaa, Ummata Oromoo fi qabeenya Oromiyaa waraanan barbdeessa Itoophiyaa ijaarra jedhanii yaaduun abjuu dhuwwaa. Warri ODP jedhamu kun kan OPDO irraa adda isaan godhu gorsaa fi akeeka harcaatota Dargii fi nafxanyootan oofamuu dha. Boola keessatti kufuuf deeman illee argaa hin jiran.
Qabsoo bilisumma Sabni Oromoo har’a keessa jiru kanatti uummata kana sobnee waan nu barbaachise goona jedhanii yaaduun waan hin fakkaanne. OPDOn ykn akka isaan of waamu jalatan ODPn Uummata Oromoo gowwomsuu miti of iyyuu gowwosuuf dandeetti hin qabdu. Guyyaa walakaa soba afuufaa olitti. Waan dubbatte hojiin dhugoomstee hin beektu. “Karaan sobaan irra darban irra deebi’uuf nama dhibaa” jedhu.
Namni prezedaantii uummata tahe tokko karaa maraan uummata sanaaf itti gaafatama duraa fi guddaa qaba. Nama ba’aa guuddaa gatittii isaa gubatti baatee deemu akka tahe dagachuu hin qabu. Namni kun erga prezedaantii Oromoo ti jedhamee kaasee afaan isaa isa akka afaan waraabessa ilkaan guute keessaa bahu waa’ee sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiraatu qofa. Uummatni Oromoo eenyuun qaba? Nageenya uummata Oromoof dhaabbachuu miti diqaallonni Habashaa kun Oromiyaa irratti komandi postii dhaabaanii fi Uummata Oromoo irratti waraana labsaa akka jiran ifatti argaa jirra. Prezedanttii Oromoo irraa kan eegamuu silaa ibsaa, bishaan, karaa, mana barumsaa, mana waldhaansaa, midhaan kan nyatuu fi sanyii facaafatu gahaa qabaachuu isaa tuhachuu dha. Yoo hin qabu tahe akkaata itti argachuu danda’u faluu qaba.
Uummata Oromoo qe’ee isaanii irraa buqqa’anii rakkina qaban namni dubbatuuf tokko hin jiru. Mootumman Oromoo waa’ee isaanii kaasuu ni sodaata. Naannoo magaalota Oromoo keessa akka qubatan warri Habashaa waan hin barbaanneef jecha. Midiyaa fi ijaarsi Habashaa dhibaa ol jiran waa’ee baqqataa Oromoo kaasu ni lagatu. Aktiivistoonni Habashaa nama Tamaanyi Bayyanee jedhamu hiriyaa Kononeel Abiyiin dursamu maqaa baqatoota Itoophiyaan qarshii milliyoona sodomaa ol funaane baqatoota Amhaaraa fi Geeda’oo fi hire. Sababni baqatooti Geeda’oo akka argatan tahe waan Uummatni Oromoon buqqa’uun isaanii akka dhageetii qabatuuf. Uummatni Oromoo ofii isaa iyyuu Oroma buqqisaa jiraa jedhamee akka abaaramuu gochuuf. Sana qofaa miti. Manni Baankii Itoophiyaa warra naannoo Amharaa irraa buqqa’ee milliyoona afuur keninaan hin xiqqaate jedhanii tufatanii fudhachuu didan. Namoota naannoo Tigrayi buqqa’aniif mani bankii kun millioona sadii laateef. Namni naannoo Tigrayii buqqa’uu illee daga’ee hin beeku. Maaliif uummatni milliyoona lamaa ol tahu Oromiyaa keessaa buqqa’eef gargaarsi kun hunduu hin godhamneef? Nama maqaa isaa nyaatu malee nama isaa dhaabbatuu fi dubbatu waan hin qabneef.
Diqaaloonni Habashaa akkauma abbootii isaanii uummaata Oromoo fi Oromiyaa waraanan cabsuuf abbalaa jiru. Barri jaarraa kudha sagalii fi jaarraa digdamii tokkoffaa adda. Galatni WBOf haa tahu malee guyyaan aduun bilisummaa Oromiyaa irratti baatu fagoo hin jiru. Har’a WBOn humna diinaa kana of irraa ittisuu irra darbee haleelaa jira. Kana malee humni WBO guddatee dagaagaa fi bargaagaa jira. Oromiyaa guutuu keessatti kokee diinaa hudhee qabuuf deema. Uummtni Oromoo waan qabu maraan WBO wajjin dhaabbatee aarsaa baasaa jira. Waan nama gadisiisu yoo jiraate humni diinaa yaroo WBO rukkutamee baqataa jiru nama Oromoo nagaa karaa deemu ajjeessan haaluu baha jiraachuu dha. Obbo Lammaa Magrsaa fi Kononeel Abiyi Liyuu Poolisii naannoo Amhaaraa fi RIBn WBO marsanii fixxuu shirri yaalame hin milkoofneef. Liyuu Poolisii naannoo Ahaaraa fiduu miti utuu nukuleera Ameerikaa fidanii iyyuu WBO cabsuu fi Uummata Oromoo injifachuun hin danda’an. Qabsoon Saba Oromoo injifachuu malee injifatamuu bira darbee jira. Dugaa kana jala murree yoo waliif himnee qabeenyaa fi lubbuu baayyee barbadeessuu irraa oluu dandeenya. Yoo sammuu qabatan ammaa fi ammatti waraana Uummata Oromoo irratti labsitan kana kaasa.
Sabboonummaan Oromoo akkamitti hubatama?